ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အတွက် လိုအပ်နေ တဲ့ ဆေးရုံပစ္စည်း ငွေကျပ် သိန်း (၁၁၀၀) ကျော်ဖိုး လှူဒါန်းသွားမယ့် သီရိသုဓမ္မသူကြွယ်ဘွဲ့ရ ဦးစိုင်းမျိုးဝင်း တို့ မိသားစု ( ၀မ်းမြောက်စရာကြီးပါ ..) – Na Pann San
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အတွက် လိုအပ်နေ တဲ့ ဆေးရုံပစ္စည်း ငွေကျပ် သိန်း (၁၁၀၀) ကျော်ဖိုး လှူဒါန်းသွားမယ့် သီရိသုဓမ္မသူကြွယ်ဘွဲ့ရ ဦးစိုင်းမျိုးဝင်း တို့ မိသားစု ( ၀မ်းမြောက်စရာကြီးပါ ..)
Na Pann San W | March 15, 2020 | Local News | No Comments
ကမ္ဘာ့ ကျန်း မာရေး အဖွဲ့ မှ COVID-19 ကို မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ရောဂါဖြစ်ပွား သူ ယခု ချိန်ထိ တစ် ဦး တစ်ယောက် မှ မတွေ့ရှိရေ သးသော် လည်း ပြည်ပ နိုင်ငံများ တွင် ပျံ့နှံ့မှု များ ရှိနေ ပါ သဖြင့် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ( Pandemic ) အနေဖြင့် ( ၁၁-၃-၂၀၂၀ )ရက်နေ့ တွင် သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့ ပါ သည် ။
ကျွန်တော်တို့ EFF FOUNDATION( EXCELLENT FORTUNE FOUNDATION )သည် ပြည်သူ့ဆေးရုံများအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် ခါးပတ်ကြိုးပါ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ရောဂါ အကာအကွယ်ဝတ်စုံ( PPE ဝတ်စုံ ) ၃,၀၀၀စုံ၊ တစ်ခါသုံး ရာဘာလက်အိတ်များ( Vinyl Disposal Gloves )နှင့် ရောဂါကာကွယ်ရေး နှာခေါင်းစည်းများ( Face Masks )ကို တရုတ်နိုင်ငံမှ မှာယူထားပြီး လမ်းခရီး အဆင်ပြေပါက ( ၂၀.၃..၂၀၂၀ ) ရက်နေ့ခန့်တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
COVID-19 အတွက်လှူဒါန်းမည့် ပစ္စည်းအရေအတွက်နှင့် ဈေးနှုန်းစာရင်းမှာ
1. PPE ဝတ်စုံတစ်စုံလျှင် ကျပ် ၃၀,၀၀၀/-နှင့် အစုံ ၃,၀၀၀ အတွက် ငွေကျပ် ၉၀,၀၀၀,၀၀၀/-(ကျပ်သိန်း ကိုးရာ)၊
2. ရာဘာလက်အိတ် တစ်စုံလျှင် ၂၀၀ ကျပ်နှင့် အစုံ ၂၅,၀၀၀ အတွက် ငွေကျပ် ၅,၀၀၀,၀၀၀/-(ကျပ်သိန်း ငါးဆယ်)၊
3. N95 Mask တစ်ခုလျှင် ကျပ် ၄,၀၀၀/-နှင့် အရေအတွက် ၃,၀၀၀ ခုအတွက် ငွေကျပ် ၁၂,၀၀၀,၀၀၀/-(ကျပ်သိန်း တစ်ရာ့နှစ်ဆယ်)၊
4. Face Mask (အထူ) တစ်ခုလျှင် ကျပ် ၅၀၀/-နှင့် အရေအတွက် ၂၀,၀၀၀ အတွက် ငွေကျပ် ၁၀,၀၀၀,၀၀၀/-(ကျပ်သိန်း တစ်ရာ)
စုစုပေါင်း လှူဒါန်းသောပစ္စည်းများ၏ ကျသင့်ငွေပမာဏမှာ ငွေကျပ် ၁၁၇,၀၀၀,၀၀၀/-(ကျပ်သိန်း တစ်ထောင့်တစ်ရာခုနှစ်ဆယ်တိတိ) ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ EFF FOUNDATION အနေဖြင့် လိုအပ်သည့် ပြည်သူ့ဆေးရုံများသို့ ကိုယ်တိုင် သွားရောက် လှူဒါန်းခြင်း ( သို့ ) ဆေးရုံ တာဝန်ရှိသူများမှ လာရောက်ထုတ်ယူခြင်း စသည့် နည်းလမ်းများဖြင့် လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် လိုအပ်လျက်ရှိသော ဆေးရုံများမှ တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ အသိပေးအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဌာန တွင် အခြေခံ သွေးစစ်ဆေးခြင်း ကို မပြုလုပ်ပေးတော့
မန္တလေးအမရပူရ အနီးမှာ ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ ကောင်းကင်ပေါ်က မဲမဲဝိုင်းဝိုင်းကြီး ဆိုတဲ့ ( ရုပ် / သံ )
Covid-19 အတည်ပြု လူနာအမှတ် (၁၆) ၏ လိမ်လည် ဖုံးကွယ်မှုကြောင့် အပြစ်မဲ့စွာ သေဆုံးနိုင်ခြေရှိသူများ